Ahoana ny hanoratana ny tany - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana ny hanoratana ny tany
1. Izahay aloha mampiasa lamba mando mba hanadio ny gorodona hanala vovoka sy maloto.Rehefa maina ny tampon-tsofina amin'ny gorodona dia atsofazo moramora ny savoka ranon-javatra eo amin'ny tany manodidina ny kianja iray. Zara raha afaka mandeha tsara.
2. Mampiasà kapila kely hialana amin'ny toerana amporisihan'ny savoka likorany miverimberina imbetsaka, mba hampifangaroan'ny lamba ny savoka eo amin'ny gorodona, izay tsy hikoriana. Avy eo dia tohizo ny dingana teo aloha, tohizo ny manondraka ranon-tsavony, ary manisy feta amin'ny mop. Mandra-pamafosana ny gorodona rehetra dia atero indray.
3. Manaraka, avelao hijanona eo amin'ny gorodona mandritra ny ora maro ny savoka ranon-tsiro, mba hozaraina amin'ny laon-javamanitra ilay savoka rano.
4. miaraka amin'ny lambam-baravarana, ahosotra miverimberina eo am-pototry ny hazo, mandritra ny fotoana vitsivitsy dia ho hitanao fa tsy misy menaka intsony ny velaran'ny gorodona, fa lasa toy ny felam-boninkazo kosa izy ireo.Mijery ny haavon'ny hazo vita amin'ny halavirana dia tazana Ampifamadiho no ampiharina, izay tena tsara tarehy. Azonao atao ny manohina azy amin'ny tananao tsy mahatsapa menaka.
5. Diniho tsirairay tsirairay mba hahitana raha misy toerana manitra, ary manamboara fanamboarana .. Amin'izany fomba izany, ny famafazana ny gorodona vita amin'ny hazo dia vita.
Ny andraikitry ny fandrorohana gorodona:
Esory ny takelaka matevina ao anaty gorodona, atokana ny fitaovana amin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny fikororosana, mampihena ny fahasimbana amin'ny fitaovana noho ny fitrandrahana na ny fifandraisana amin'ny akora manimba eny amin'ny rivotra, ary tratrarina ny tanjon'ny fanitarana ny fiainana sy ny hatsarana. Ny tena zava-dehibe kokoa dia ny fitaratra marevaka natsangan'izy io fa mateza indrindra, izay mety hisorohana ny fantsona, ny fikapohana, ny hantsana, ny fatram-bavony ary ny ratra hafa.
Ahoana ny hanoratana ny tany Ny atiny mifandraika